Muxuu "Suuqgeynta Salka ku Haya" dhab ahaantii uga jeedaa | Martech Zone
Anigoo ah qof xirfad ka sameeyay waxyaabo, isgaarsiin, iyo sheeko sheeko, waxaan boos gaar ah ku leeyahay qalbigayga doorka “macnaha guud.” Waxa aan la xiriirno - ha ahaato ganacsi ama nolosheena shaqsiyadeed-waxay noqoneysaa mid ku habboon dhegeystayaashayada keliya markay fahmaan macnaha guud ee farriinta. Macno la'aan, macnaha ayaa lumay. Macno la'aan, dhagaystayaashu waxay ku jahwareeraan sababta aad ula xiriirto iyaga, waxa ay tahay inay ka qaadaan, iyo, ugu dambeyntiina, sababta ay farriintaadu xiriir ula leedahay iyaga.
Dib-u-habeynta ayaa ah tusaalaha caadiga ah (uguna xun) ee macnaha guud ee ganacsiga gaffe. Meeshii wax aad hore u eegi jirtay uu kugula soconayo xilligan xaadirka ah haddaad weli xiisaynayso iyo in kale. Inaad u aragto xayeysiis sharaabaadyo markaan raadinayo degel websaydha ujeedo ganacsi darteed waa mid meesha ka baxsan, sidaa darteedna ka baxsan macnaha. Laakiin waxyaabo badan oo cilladaha macno darrada ahi waxay ku dhacaan wadahadalka - marka wax aad sheegtay aad ku keento aragti madhan ama jahwareer leh, waad ogtahay inaad u soo bandhigi lahayd macno badan wixii aad ku hadlayso ama aad weydiinayso.
The Oxford English Dictionary wuxuu u qeexayaa erayga "macnaha" sidan:
Duruufaha sameeya goob dhacdo, bayaan, ama figrad, iyo marka la eego taas oo noqon karta mid buuxda fahamsan waana la qiimeeyay: go'aanka waxaa lagu qaatay macnaha guud ee qorsheeyey dhimista kharashka
Qaybaha ay ka kooban tahay wax qoran ama la hadlay taas markiiba hormaraan oo raac erey ama marin iyo cadee macnaheeda: ka shaqeynta eray bixinta waxaa saameeya macnaha guud ee ereyadu u muuqdaan
Markaa haddii aan ku dabaqno qeexitaanka macnaha ku dhaqanka ku dhaqanka suuqgeynta, halkaasoo “suuqgeynta” ay ku lug leedahay gudbinta farriin gaar ah dhagaystayaasha, markaa suuqleydu waxay u baahan yihiin inay fiiro gaar ah u yeeshaan waxa ka horreeya ama la socda gudbinta farriimahooda. Uguyaraan haddii ay doonayaan dhagaystayaasha inay fahmaan macnaha ama ku habboonaanta waxa ay la xiriirayaan.
At Dhibcaha, Waxaan uga sii gudubnay inta aan sheeganayno in suuqleyda iyo hoggaamiyeyaasha dijital ahi ay si wax ku ool ah u maareyn karaan oo keliya khibradda macaamiisha markay suuq geynayaan macnaha macaamiisha ay ula falgaleen astaantooda. Shaqooyin badan oo otomaatig ah oo suuq geynaya ayaa isku day ka sameynaya suuq geynta macnaha guud (tusaale ahaan, haddii macaamiisha ay soo degsadaan warqad cad, ka dibna buug yar ayaa emayl loogu soo dirayaa iyaga laba toddobaad kadib). Laakiin dhibaatada ka jirta istiraatiijiyado otomaatig badan oo suuqgeyn ah waxay kaliya tixgelinayaan falcelinta emaylka. Ma tixgelinayaan waxa isticmaaleha ah ee uu sameyn lahaa ka dib markii uu soo degsaday warqad cad. Ka waran haddii ay saacado ku qaataan websaydhka? Ama tweet ku saabsan warqadda cad maalinta xigta? Miyaadan rabin inaad raacdo aad uga dhakhso badan laba toddobaad?
Suuqgeynta macnaha leh ee guuleysta waxay u baahan tahay in ka badan inta otomaatiga suuqgeynta ay bixin karto. Waxaan aaminsanahay inay qaadaneyso tiknoolajiyad awood u siinaysa seddex hawlood:
Awooddaada ururi caqliga macnaha guud waxa ku saabsan waxa ay dhageystayaashaadu sameynayaan, meel kasta oo ay joogaan, ka hor waad gaadheysaa iyaga. Si kale haddii loo dhigo, sida OED sheegto, maxaa kaa horeeya marinkaaga.
Awooddaada maareeyaa waxyaabaha dijitaalka ah, ama marin, lafteeda. Hadana haddii aad haysato macaamiil aad u tiro badan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad tan ku samayn karto miisaan, si fudud.
Awooddaada gaarsiiso waxyaabahaas Meelkasta oo macmiilkaagu kujiro, qalabkasta, qaab otomaatig ah si ficilada dhagaystayaasha horay loo qeexay qaarkood ay si otomaatig ah u kiciyaan gudbinta waxyaabaha. Waxayna ku dhacdaa wakhti cayiman oo aad cayimto. Si kale haddii loo dhigo, adigaa gacanta ku haya waxa ay arkaan iyo markay arkaan ilaa inta sirdoonkaaga macnaha guud ee ku saabsan waayo-aragnimadooda ay kuu sheegayaan inay diyaar u yihiin inay cunaan waxa ay tahay inaad dhiibto.
Way fududahay, runtii, laakiin tikniyoolajiyadda ka dhigi karta inay dhacdo waa mid aad u adag. Waxaan ka qornay suuq geynta macnaha buug cusub oo hadda la daabacay, oo la yiraahdo "Macnaha guud ee Suuq geynta. Waxaan la shaqeynay Wiley Press (oo daabacda buugaagta caanka ah ee "For Dummies" ee aad ka hesho buuga dukaanka) si aan u abuurno, waxayna daboolaysaa:
Sidee macaamiisha dijitaalka ahi isu beddeleen iyo sababta ay rajadooda ku saabsan noocyadu u beddelayaan
Sidee suuq-geynta macnaha guud uu kaaga caawinayaa inaad la kulanto waxyaabaha macaamiisha laga filayo
Waxa aad uga baahan tahay teknolojiyadda suuqgeynta si aad ugu dhiibto ballanqaadka suuq geynta macnaha guud
Wax badan ayaa jira, laakiin kuwani waa kuwa muhiimka ah ee laga qaato. Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay, iyo inaan ku siiyay macnaha guud ee ku saabsan buugga sidaa darteed waxaad u aragtaa qiimaha ku degsashadiisa. Si kastaba ha noqotee, way ka fogtahay suuqyadan mawduucan si ay ula xiriiraan iyada oo aan loo eegin. La socodsii sidaad u aragto buugga faallooyinka hoose!
Soodejiso Macluumaadka Macluumaadka Dhimmayaasha
Tags: Macnaha guudsuuq geynta macnaha guudsuuq geynta macmacaankasuuq geynta macnaha guudsaxarodaraaseynwiley
Apr 9, 2016 at 6: 45 AM
Maqaal aad u fiican, Charlotte. Mawduucani wuxuu bixiyaa fikrad cad oo ku saabsan waxa suuq geynta macnaha uu yahay iyo sida loogu qaado suuq geynta waxyaabaha heerka ku xiga. Xaqiiqdii waan raaci doonaa iskuxirka oo waxaan la wadaagi doonaa waayo-aragnimadayda markaan akhriyo buuggan.